Dibad-bax ka dhan ah Ciyaarta Super Bowl-ka oo ka dhacay Minneapolis -
Dibad-bax ka dhan ah Ciyaarta Super Bowl-ka oo ka dhacay Minneapolis
Magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa waxaa maanta ka dhacay dibad-bax looga soo horjeeday ciyaarta Super Bowl-ka oo ka dhacaysa magaalada Minneapolis.
Maanta oo ah Axad, bisha Febraayo-na ay tahay 04, 2018 waxaa dalka Mareykanka iyo dunida kale laga daawanayaa ciyaarta kama danbaysta ah ee loo yaqaano Super Bowl. Ciyaartan oo ay ku kulmayaan labadda kooxood ee Philidelphia Eagles iyo New England ayaa ka ka dhacaysa garoonka weyne ee US Bank Staduim oo ku yaala magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, dalka Mareyknka.
Haddaba dadweyne gaaraya boqolaal ayaa iyagu ku dibad-baxay ciyaartan lagu qabanayo magaalada. Dadka mudaharaadayey ee dibad-baxa sameeyay ayaa ka cabanayey dhibaatooyinka lagu hayo dadka madoow, Muslimiinta, Soomaalida, dan’yarta, dadka soo galootiga ah iyo dhamaan dadka laga tiradda badan yahay ee iyagu ku dhaqan kuna dulman dalka Mareykanka.
Hadaladii ay ku dhawaaaqayeen dadkan sameeyay dibad-baxa ayaa waxaa kamid ahaa, ” Ka aamusimeyno dilka lagu hayo dadka madoow”, “Yeelimayno dulmiga lagu hayo dadka Muslimiinta ah iyo Soomaalida”, “Noloasha dadka madoow waa muhiim”, iyo hadala kale oo dareenkooda ka matalaya.
Ammaanka magaalada Minneapolis ayaa aad loo sugay. Jidadka u dhow garoonka ay ciyaartu ka dhacayso iyo jidadka kale ee dhexmara faras magaalaha Minneapolis ayaa la xiray oo waliba ciidan tiro badan la dhigay.
Talliyaha ciidanka Booliiska magaalada Minneapolis Medaria Arradondo iyo madax kale oo ka socda ciidanka uu isagu u taliyo ayaa iyagu goobtaas joogay. Talliye Arradondo oo isagu la hadlay qaar kamid ah dadkii dibad-baxa sameynayey ayaa u sheegay in ay xaq u leeyihiin in ay dibad-baxaan, balse uu ka codsanayo in ay ammniga sugaan, si xasiloona ay u dibad-baxaan.
Dadweynaha dibad-baxa sameeyay ayaa cimilada magaalada Minneapolis aad iyo aad u qaboow iyagu ay saacado badan taagnaayeen banaanka, isla markaas waxay lug ku tageen meel wax yar u jirta garoonka ay ciyaarto ka dhacayso. Cimilada qaboow awgeed ayaa waxaa loo digay dhamaan dadka banaanka u baxaya maanta.
Dadkan dibad-bax sameeyay ayaa waxay hor istaageen gaadiidkii iyo tareemadii dadka ciyaarta imaanaya soo qaadayey. Sidoo kale waxay xireen oo ay isku gudbeen in mudo gaaban ah albaabadda laga gelayey garoonka ciyaartu ay ka dhacayso.
Related Items:Featured, minneapolis, Super bowl, Super bowl Minneapolis, Super Bowl protest
Hodan Xasan: Musharax u taagan Kursiga Aqalka Sharci-dejinta ee Minnesota
Department of Revenue offers tips for choosing the right professional tax preparer